Microsoft waxay rabtaa jaakada 3,5 mm inay kusoo laabato taleefannada casriga ah | War gadget
In kasta oo ay run tahay in Apple aysan ahayn shirkaddii ugu horreysay ee dooratay inay ka baabi'iso isku xirnaanta taleefanka taleefannada gacanta, haddana waxay ahayd shirkaddii ugu horreysay ee weyn ee dooratay inay ka dhigto mid la waayo. Waxyar inbadan oo soosaarayaasha ayaa doorbiday inay sameeyaan Jack la'aan, jaakad taas waxay ka hor istaagtay taleefannada casriga inay khafiif noqdaan marka lagu daro qabsashada qayb aad muhiim u ah aaladda dhexdeeda.
Tiknoolajiyadda aan maanta ka dhex helayno taleefannada casriga ah waxay na siisaa tiro aad u tiro badan oo ka mid ah kuwa adeegsada dalool kasta oo ka mid ah aaladda iyo jaakadda sannadihii la soo dhaafay waxay noqotay meel bannaan. Microsoft waxay xareysay rukhsad ay ku muujineyso in kastoo ay soo jeedeen soo saarayaasha. waa suurtagal in la sii wado oo ay ku jiraan jaakada.
Patent-ka Microsoft wuxuu na tusayaa jaakad kor u qaadeysa cabbirkeeda iyadoo ay ugu wacan tahay xuubka jilicsan ee uu qariyo, xuub xaddiga ballaadhinaya markaan fiilada galino. Fikradda xuubkan haddii ku dheji mid ka mid ah dhinacyada terminalka ama dhabarka ama hore, Abuurista nooc ka mid ah buur-buur maadaama kamaraduhu xilligan bixiyaan tiro badan oo telefoonno ah.
Waxa cad ayaa ah in haddii Microsoft ay fikraddan horay u soo saari lahayd, ay u badan tahay in shirkado kale ay soo qaadan lahaayeen, ama aysan ahayn. Laakiin sida tikniyoolajiyadda iyo wacyigelinta taas oo wershaduhu u adeegsadeen adeegsadayaasha, mustaqbalku waa headphones-ka Bluetooth-ka ee wireless-ka ah ama, haddii taasi la waayo, sameecadaha dhagaha leh, haddii aan dooneyno tayo sare, oo leh xiriir USB-C ah ama danab haddii aan ka hadalno aaladaha Apple.
Waqtigan xaadirka ah suuqa waxaan horeyba uga heli karnaa soosaarayaal kala duwan oo na siiya xalka labada dhinacba, in kasta oo xaqiiqda ay tahay in soo saarayaasha doortay inay baabi'iyaan xiriirka jaakada, ay sii wadaan bixiya adabtarada inaad sii wadato adeegsiga samaacadaha dhagaha ee dhaqameed leh xirmada jaakada.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » Microsoft waxay rabtaa jaakada 3,5mm inay kusoo laabato taleefannada casriga ah